Homepage - Tatero izao
Login amin'ny mpanjifa
Asehoy ny fikarohana
Afeno ny fikarohana
Manohana anao amin'ny fisorohana ny tsy fahalalam-pomba sy ny fitondran-tena tsy etika eo amin'ny sehatry ny asa
Ny fitondran-tena tsy mendrika dia mitentina an'arivony tapitrisa dolara isan-taona ny orinasa manerantany. Ny fikambanana miaraka amina tobim-pahitalavitra mahaleo tena dia nanapaka ny antsasaky ny fatiantoka hosoka.
Tohano an-trano Fampianarana sy famakafakana
SISA fitantanana ny raharaha BESPOKE & UNIQUE - ETHICSPRO®
24 ANDRO ANDRO, ANDRO FITO ANDRO
Report It Now ™ dia manome fitaovana ny orinasanao hampiroboroboana ny toeram-piasana tsy misy fitaka sy fitondran-tena tsy mendrika.
Report With Now dia miasa miaraka aminao sy ny orinasanao hamoronana kolontsaina mahitsy sy mahitsy eo amin'ny toeram-piasana. Ny fikarohana dia mampiseho ny fananana laharam-pahefana mitokana na miafina momba ny tranonkala na tranonkala mifototra amin'ny tranonkala amin'ny fomba mahomby amin'ny fanafoanana ny risika amin'ny fihetsika tsy etika, toy ny hosoka na fanararaotana
Izahay dia mampifangaro ny laharam-pahamehananay amin'ny fanabeazana, fanohanana ary famakafakana mitohy mba hanampiana anao hahatratra tontolo etika ho an'ny mpiasanao, mandritra izany fotoana izany koa, mamporisika azy ireo hitory izay fitondran-tena tsy mitonona anarana, azo antoka ary tsiambaratelo.
Hijery ny politika fiarovana fiainan'olona.
ny hosoka asa tsikaritry ny tendrony
amin'ny fikambanana iray dia tombanana ho very ny vola miditra noho ny hosoka isan-taona
azo inoana kokoa fa ny mpiasa hanangona toro-hevitra raha toa ka mampihatra ny fikambanana fiofanana momba ny hosoka
EthicsPro® - azo antoka, tsy fantatra anarana, mora
Vaovao ve ny orinasanao amin'ny EthicsPro®? Te hahafantatra vaovao misimisy ve ianao?
Raha te-hiditra amin'ny boky torolàlana momba ny torolàlana, azafady tsindrio eto ambany.
Midira amin'ny boky torolàlana momba ny eticspro®
Fanamarihana: ireo antontan-taratasy ireo dia nametra ny fidirana. Raha tsy azonao antoka raha ianao ity dia manana olana amin'ny teny miafina, na mieritreritra fa mitaky ireo antontan-taratasy ireo ianao, azafady Mifandraisa aminay.
Mahazo valiny isika.
Tatitra Hot Now whistleblows dia nanome ny mpiasanay rafitra sy filaminana tsy miovaova izay ahafahan'izy ireo mitatitra fihetsika tsy mendrika. Ao amin'ny indostria mety hisian'ny asa fisolokiana, ny serivisin'izy ireo dia namonjy dolara an'arivony nandritra ny taona maro.
Mifandraisa aminay hanombohana
Tianay ny manampy amin'ny fomba rehetra azonay atao. Mandefasa hafatra aminay ary hiverina any aminao izahay raha vantany vao azonay atao. Raha tsy izany, azafady telefaona aminay amin'ny fampiasana ny isa etsy ambany.
Tatero izao Now ™ Ltd.
Ivontoerana mailaka ao Waikato
Izahay eto dia hanampy anao. Manaova tatitra
Copyright © 2021 · Hiditra